This user agreement is an agreement between you and www.myanpay.com.mm that is MyanPay E-commerce System service and their application (MyanPay and any related service) this agreement has enforcement of your right and so you need to read carefully. You are urged this agreement to be printed or put in your computer hard drive for references. In case of willingness to know the mode of function and further particulars, contact and make enquiry with www.myanpay.com.mm. In the agreement, you or your means the person who is subject to be paid services. MyanPay, I or Our means www.myanpay.com.mm and their subsidiary organizations, directors, official, staffs, representatives and contractors.
Legal relationship between you and MyanPay
Registration for the services means you have stipulated for the payment process as per your instruction in pursuance of the term of this agreement as your representative. As regards intentional action inappropriateness of MyanPay or significantly making ignorance on resulted damages and losses, MyanPay will take no responsibility about it. As for you, (1) MyanPay is notasaving bank nor banking service but payment services it has been doing. (2) MyaPay is not your treasurer of the finance butarepresentative for the payment of the performances.
1. Process and Obligation of User
To achieve service, you shall register in the MyanPay account. You may apply for your services under MyanPay account for payment, running business, earning or shopping payment for services. Any process using your password shall be accepted on the utilization of service. You have responsibilities on the damages and losses resulted from all the processes applicability of your account and password. Compensation cannot be claimed from us.
Comprehensive and true information shall be given for registration from you and any changes shall be made immediately. You shall agree not to pretend for another or application of name of others without permission. In case there has findings of incorrect and incomplete and inaccurate information from you, MyanPay has right to call off the utilization of service. The cost and expenses or any losses resulted directly or indirectly from your inaccurate and unsure information may be acquired from you.
3.	Service Charges
Current fee Schedule of MyanPay for the service has been uploaded in the website payment as for MyanPay account and adding finance and withdraw money and the appropriate service charge to the bank shall be undertaken to be paid.
4.	Prohibited Processes
Inacertain illegal earning, you shall agree not to use MyanPay. Illegal performances, services, MyanPay website or any website mentioned cannot be used. In contravention of the terms of this agreement inclusive of illicit, cheating or suspicious of MyanPay to have perform resulted, temporary termination of utilization or cancellation shall be made. Then, the balance from MyanPay account cannot be withdrawn and you have to fully cooperate in making inquiry of the suspicious affairs with MyanPay. Not to create under the impression of user of MyanPay or its responsible person or password available of their accounts or other particulars shall be agreed not to be asked from the customer of MyanPay.
5.	Electronic Communication
As regards your account and your communication of the service, this agreement and other agreements will provide in association with electronic within the framework of law. For regarding electronic, You shall agree to acquire all the communication technique from MyanPay. Uploading electronic communication technique on the website of the MyanPay or forwarding to your email and you should keep record by copying of any communication. As of date of sending, any electronic or paper format (whether available or not from you) not later than5days of the working day, it shall be deemed as writing. Agreement of using of your electronic communication technique shall be deemed to include until cancellation of your agreement through the phone to customer service or notice to MyanPay with the use of this form on your decision. For so have done, MyanPay will terminate utilization of service.
6.	Correct email
You shall agree for the warranty of application of internet and current email. MyanPay will communicate with you by using appropriate technique on basis of the particulars you have given but the expenses appropriate for the email and internet you have used or the email has not been sent are not responsible. Incorrect email address to MyanPay or changes of this email or cancellation of it, you have responsibility to notify to MyanPay at once. In the event of wishing to alter your email address or cancel, you have to communicate urgently to MyanPay office for MyanPay account office.
URL has prohibited not surfing any pages not beginning www.myanpay.com.mm to the MyanPay member in the event of not having www.myanpay.com.mm in the Merchant sites which are the integral part of MyanPay website, it is prohibited not to be surfed.
8.	No Spam
You shall agree not to use email addresses of MyanPay customers by sending unofficial email. You shall agree not to use spam mail for achieving bonus.
You shall not divulge your account’s password or others’. MyanPay has no responsibilities for the losses resulted from the misleading application of passwords of the users.
If you apply or attempt to apply our service for your payment and acceptance and measure of account, apart from these, (interference, hacking, safety standard and performances disruption), you account shall be terminated without prior notice. Additionally, your account shall be recognized at blacklist and penalties (including charge of electronic law) shall be given. This user agreement has proper control the right of disposal to anyone in relation to your performances on your particulars without any initial permission from you. MyanPay shall not claim for damages of all or any destruction in view of MyanPay.
You shall agree not to shift without written approval of the MyanPay of the right or duties under this agreement and MyanPay has right to transfer duties and any privilege under this agreement without your permission.
12. Service Upgrade (or) Server Maintenance
Sometimes, maintenance and upgrade processes of MyanPay's Services can be performed in the minimum time of use and will be informed to MyanPay users in advance. During the maintenance process, MyanPay Service will be temporarily suspended and MyanPay users have no right to ask for compensation.
Prior to payment for the services of the shopping from MyanPay users, not only terms and agreement stipulated by MyanPay but also terms and conditions of merchants are required to be perused carefully. You may have right to call off this process in pursuance of targeted period of time with the use of cancellation form prescribed by MyanPay. User shall bear the charges of the MyanPay services appropriate for the transition and process already cancelled.
14. Acceptance of Cash
Prior to the acceptance of cash, it is necessary to have MyanPay business account to have been stipulated. MyanPay users opening business account in MyanPay may sell, pay service and accept money for it. In violation of policies and agreement executed between MyanPay and merchant, account may be cancelled and acceptance of money can be denied.
15. Withdrawing money from bank account
MyanPay users may withdraw money at anytime from MyanPay. However, MyanPay business account users (merchants), in default of information of the product and service delivery of the sold ones during the prescribed period of time, the appropriate expenses of the defaulted product and service can be withdrawn from MyanPay account. For the transition defaulted by the merchant, the service charge of the MyanPay appropriate shall be paid by merchant.
MyanPay အသုံးပြုသူများအတွက် User Agreement
ဤ User Agreement သည် သင်နှင့် www.myanpay.com.mm ကြား ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်ဖြစ်သည်။ ၄င်းမှာ MyanPay E-commerce System ဝန်ဆောင်မှု (MyanPay နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့် ဝန်ဆောင်မှုမျိုးမဆို) အသုံးပြုခြင်းအတွက် ဖြစ်သည်။ ဤ သဘောတူညီမှုသည် သင်၏အခွင့်အရေးများကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသဖြင့် သင်အနေဖြင့် ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုရန် လိုအပ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ ဤ Agreement ကို ပုံနှိပ်ထားရန် သို့ သင့် computer hard drive ထဲတွင် ကိုးကားရန်အတွက် ကူးယူထားရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ထပ်ဆင့် အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကို သိရှိလိုပါက www.myanpay.com.mm နှင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။ Agreement ထဲမှ “သင်” (သို့) “သင်၏” ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းခံရသောသူကို ဆိုလိုသည်။ “MyanPay”,” ကျွန်ုပ်” သို့ “ကျွန်ုပ်တို့၏” ဆိုသည်မှာ www.myanpay.com.mm နှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကန်ထရိုက်တာများကို ရည်ညွန်းပါသည်။
1. အသုံးပြုသူ၏ လုပ်ငန်းစဉ်တာဝန်များ
ဝန်ဆောင်မှုရရှိရန် သင်သည် MyanPay account တွင် မှတ်ပုံတင်ရပေမည်။ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုကို MyanPay Account ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ငွေများရရှိခြင်း (သို့) ဈေးဝယ်ယူခြင်း၊ ၀န်ဆောင်မှု အတွက် ငွေပေးချေခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ Password ဖြင့်သုံးသော မည်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်မဆို ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း လက်ခံရပေမည်။ သင်၏ account နှင့် password ကိုသုံးသော လုပ်ငန်းစဉ်များ အားလုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများသည် ၎င်းတို့မှာသင်၌သာ တာဝန်ရှိပေသည်။ လျော်ကြေးကို ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ မတောင်းခံ နိုင်ပေ။
သင်မှ ပြည့်စုံမှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်စရာများရှိပါက ချက်ချင်းပြင်ဆင်ရပေမည်။ သင်အနေဖြင့် အခြားတစ်ယောက်ကဲ့သို့ အယောင်ဆောင်ခြင်း (သို့) ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အခြားအမည်အား အသုံးပြုခြင်းတို့ကို မပြုရန် သဘောတူရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ပေးသော သတင်းအချက်အလက်များထဲမှ မတိကျသော၊ မပြည့်စုံသော၊ မမှန်ကန်သော အချက်များတွေ့ရှိပါက MyanPay အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအား ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းနိုင်သော အခွင့်အရေးရှိသည်။ မတိကျ၊ မသေချာသော သတင်းအချက် အလက်များကြောင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာသောရလဒ် ကုန်ကျစရိတ်များ (သို့) မည်သည့် ဆုံးရှုံးမှုများကိုမဆို သင့်ထံမှ ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုအတွက် MyanPay ၏ ယခုလက်ရှိ ကျသင့်သော နှုန်းထားများ (Current fee Schedule) ကို website ပေါ်တွင် တင်ထားပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ MyanPay Account နှင့် ပတ်သက်သော အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးများ ထပ်ဖြည့်ခြင်း နှင့် ထုတ်ယူခြင်းတို့တွင် ဘဏ်များသို့ ကျသင့်သော ဝန်ဆောင်ခများကို တာဝန်ယူပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
4. တားမြစ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ။
သင်သည် တရားမဝင်ရရှိသော ငွေများကို လက်ခံရာတွင် MyanPay ကို အသုံးပြုခြင်း မပြုရန် သဘောတူထားရမည်။ တရားဥပဒေနှင့် မညီညွှတ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ၊ MyanPay website (သို့) မည်သည့် ဖော်ပြထားသော ဝန်ဆောင်မှုမျိုး ကိုမဆို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ သင်သည် ဤ agreement ထဲမှ စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းအပါအဝင် ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သော၊ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုများ လုပ်ဆောင်နေသည်(သို့) လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု MyanPay မှ သံသယဖြစ်စရာ ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအား ခေတ္တရပ်စဲထားခြင်း (သို့) ဖျက်သိမ်းခြင်းများ ခံရလိမ့်မည်။ ထိုအခါ သင့်အနေနှင့် သင်၏ MyanPay Account စာရင်းမှ လက်ကျန်ငွေများကို ထုတ်ယူခြင်းလည်း မပြုလုပ်နိုင်ပေ။ သင်သည် MyanPay နှင့်အတူ သံသယရှိသော ကိစ္စရပ်များ စုံစမ်းရာတွင် အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းပါဝင်ရလိမ့်မည်။ MyanPay အသုံးပြုသူ (သို့) MyanPay ၏ တာဝန်ရှိသူအဖြစ် အယောင်ဆောင်ခြင်းမပြုရန် (သို့) MyanPay ၏ customer များဆီမှ ၎င်းတို့၏ account ကိုအသုံးပြုနိုင်သော password (သို့) အခြားအချက်များကို တောင်းဆိုခြင်း မပြုရန် သဘောတူရပါမည်။
သင်၏ account နှင့် သင်၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်း (“communications”) နှင့် ပတ်သက်၍ ဤ Agreement နှင့် အခြား Agreement များသည် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ သင့်အား Electronic ဆိုင်ရာတွင် ထောက်ပံ့မှုများ ပေးပေမည်။ သင်မှ Electronic ဆိုင်ရာတွင် MyanPay မှ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများအားလုံးကို ရယူရန် သဘောတူရမည်။ Electronic ဆက်သွယ်ရေးနည်လမ်းများကို MyanPay website ၏ စာမျက်နှာများပေါ်တွင် တင်ထားခြင်း(သို့)သင်၏ e-mail သို့ ပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သင်သည် မည်သည့် ဆက်သွယ်မှုမျိုးကိုမဆို မိတ္တူကူးယူကာ မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ ပေးပို့သည့်ရက်စွဲမှ အလုပ်ရက် (၅) ရက်ထက်နောက်မကျသေးသော မည်သည့် Electronic (သို့) paper format ကိုမဆို (သင်မှရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရရှိသည်ဖြစ်စေ) "Writing” ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ Electronic နှင့်ဆိုင်သော ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများ အသုံးပြုရန် သဘောတူညီမှုသည် customer service သို့ ဖုန်းဆက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဤ ပုံစံကို အသုံးပြု၍ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို MyanPay သို့ အသိပေးခြင်း ဖြင့်လည်းကောင်း သင်၏ သဘောတူညီချက်ကို ပယ်ဖျက်သည့်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ သင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါက MyanPay မှ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းလိုက်မည် ဖြစ်သည်။
သင်သည် Internet နှင့် လက်ရှိ မိမိ e-mail လိပ်စာ သုံးခြင်းအား အာမခံရန် သဘောတူရပေမည်။ MyanPay သည် သင်ပေးသော အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ သင့်လျော်သော နည်းလမ်းများကို သုံး၍ သင်နှင့် ဆက်သွယ်မည် ဖြစ်သော်လည်း မပေးပို့ခဲ့သော e-mail အတွက်လည်းကောင်း သင်အသုံးပြုသော Internet နှင့် e-mail အတွက် ကျသင့်သော ကုန်ကျစရိတ်အတွက် လည်းကောင်း တာဝန်မရှိပေ။ သင့်၌ MyanPay သို့ မှန်ကန်သော e-mail လိပ်စာ ပေးရန်နှင့် ဤ e-mail ကို ပြောင်းလဲခြင်း(သို့) ဖျက်သိမ်းခြင်းများဖြစ်လျှင် MyanPay သို့ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားနိုင်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင့် e-mail address ကို ပြောင်းလဲခြင်း(သို့) ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်လျှင် သင်အသုံးပြုမည့် MyanPay Account e-mail အတွက် MyanPay ၀ffice သို့ချက်ချင်းဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
MyanPay member များကို URL က www.myanpay.com.mm နှင့် မစသောမည်သည့် စာမျက်နှာကိုမဆို ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသောကြောင့် MyanPay website ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Merchant sites များတွင် www.myanpay.com.mm မဟုတ်ပါက ၀င်ရောက်ခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ပါသည်။
သင်အနေနှင့် တရားမဝင် e-mail များပို့၍ MyanPay customer များ၏ email address များကို အသုံးမပြုရန် သဘောတူရမည်။ သင်သည် spam mail များကို အပိုဆုကြေးများ ရရှိရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်းမပြုရန် သဘောတူရပါမည်။
သင်သည် သင်၏ account password ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း သို့ အခြားသူ၏ password ကို အသုံးပြုခြင်းတို့ကို မပြုရပါ။ User များ၏ password များ မှားယွင်းကာ အသုံးပြုမှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် MyanPay မှ တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပေ။
အကယ်၍သင်သည် ငွေပေးချေခြင်းနှင့် ငွေလက်ခံခြင်း၊ သင်၏ account ကိုစီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အပြင် (ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ hacking ပြုလုပ်ခြင်း သို့ လုံခြုံရေး နှင့် လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဖျက်ဆီးခြင်း)တို့ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ service ကို အသုံးပြုလျှင် (သို့) အသုံးပြုရန် ကြိုးစားလျှင် သင်၏ account မှာ ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲ ချက်ချင်းပင် ရပ်ဆိုင်းခံရခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ထို့ပြင် သင့် Account အား Black Lists အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခြားပြစ်ဒဏ်များ (Electronic ဥပဒေဆိုင်ရာ စွဲချက်တင်ခြင်း အပါအ၀င်)များ ကို ပြုလုပ်ခံရနိုင်သည်။MyanPay သည် သင်၏ ဦးစွာခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ သင်၏အချက်အလက်များကို သင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ဆက်စပ်နေသော မည်သည့်သူကိုမဆို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သော အခွင့်အရေးကို ဤ User Agreement အောက်၌ သတိရှိစွာဖြင့် ချုပ်ကိုင်ထားသည်။သင်မှ MyanPay ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပျက်စီးမှုများ ၏ အစိတ်အပိုင်း (သို့) အားလုံးအတွက် MyanPay မှနစ်နာကြေးတောင်းပိုင်ခွင့်မရှိပေ။
သင်အနေနှင့် ဤ agreement အောက်ရှိ မည်သည့် အခွင့်အရေး (သို့) တာဝန်များကို MyanPay ၏ စာဖြင့်ရေးထားသော ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ရွေ့ပြောင်းခြင်း မပြုရန် သဘောတူရပေမည်။ MyanPay သည် ဤ agreement အောက်ရှိ မည်သည့် အခွင့်အရေး(သို့) တာဝန်များကို သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် MyanPay ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အဆင့်မြင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား MyanPay အား လူသုံးအနည်းဆုံး အချိန်တွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် MyanPay Service သုံးစွဲနိုင်မှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း အဆင့်မြင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အများအားဖြင့် ကြိုတင်၍ အသိပေး အကြောင်းကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ MyanPay မှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း သင့်အနေဖြင့် MyanPay ၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ MyanPay မှနစ်နာကြေးတောင်းပိုင်ခွင့်မရှိပေ။
MyanPay Users - သင်အနေဖြင့် ဈေးဝယ်ယူခြင်း၊ ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ငွေပေးချေခြင်းများ မပြုလုပ်မီ MyanPay မှ သတ်မှတ်ထားသော Terms & Agreements များအပြင် Merchant များ၏ Terms & Conditions များကို သေချာစွာ ဖတ်ရူရန် လိုအပ်ပေသည်။ သင်သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ပယ်ဖျက်ခြင်းလိုပါက MyanPay မှသတ်မှတ်ထားသော Cancellation Form ကို အသုံးပြု၍ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်းပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ မိမိပယ်ဖျက်လိုက်သော လုပ်ငန်းစဉ် (Transaction)အတွက် ကျသင့်သော MyanPay ၀န်ဆောင်ခကို User ဘက်မှကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
သင်အနေနှင့် ငွေလက်ခံမှု မပြုမီ MyanPay မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော MyanPay Business Account တစ်ခုရှိရန် လိုအပ်ပေသည်။ MyanPay တွင် Business Account ဖွင့်ထားသော MyanPay Users သည် အင်တာနက်ပေါ်မှ ဈေးရောင်းခြင်း၊ ၀န်ဆောင်မှု အတွက်ငွေလက်ခံခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။MyanPay မှသတ်မှတ်ထားသော Policy များနှင့် MyanPay နှင့် Merchant အကြားချုပ်ဆိုထားသော Agreement များဖျောက်ဖျက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ငွေလက်ခံခြင်း မပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင် Account ပါပယ်ဖျက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
MyanPay အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် MyanPay မှငွေထုတ်ယူခြင်းကို အချိန်မရွေးပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် MyanPay Business Account Users (Merchant) များအနေဖြင့် ရောင်းချထားသော ထုတ်ကုန်(သို့) ၀န်ဆောင်မှုကို သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း Product & Service Delivery ကိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ထိုပျက်ကွက်ခဲ့သော Product & Service ၏ကျသင့်ငွေကို MyanPay Account မှထုတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ Merchant ဘက်မှ ပျက်ကွက်သော လုပ်ငန်းစဉ် (Transaction) အတွက် ကျသင့်သော MyanPay ၀န်ဆောင်ခကို Merchant ဘက်မှကျခံရမည်ဖြစ်သည်။